G/W/S/027/03 London, 23/09/2003
Ujeedo:- Xaaladda guud ee jamhuuriyadda Soomaaliya
Magaca rabigeen sida guud iyo gaar ahba u naxariista, haddii aan nahay Golaha wadatashiga Soomaaliyeed, waxaa naga go'aan ah sidii aan ugu adeegi laheyn shacbiga Soomaaliyeed, sidii maalin uun ay u suurta gali laheyd in shacbiga Soomaaliyeed ka soo kabtaan musiibooyinkii, iyo raadadkii ay ka dhaxleen, reebeenna dagaaladii sokeeye ee ka dhacay jamhuuriyadda Soomaaliya.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed Wuxuu ku dadaalayaa isagoo kaashanaya shacbiga Soomaaliyeed sidii mar kale loo suurta galin lahaa ama loo soo celin lahaa sharaftii iyo qaranimadii shacbiga Soomaaliyeed uu ku lahaa shucuubta dunida.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu ka xun yahay xaaladda uu ku sugan yahay shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ee qarka u saaran in uu burburo, ayay nala tahay ayaandarro soo wajahday mar kale shacbiga Soomaaliyeed.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed isagoo ka duulaya mabda'a wadatashiga iyo nabad ku wada noolaanshaha ku dhisan "Caddaalad, Nabadgalyo iyo Midnimo", ujeedinayaa madaxda Siyaasadda, Dhaqanka, Shacbiga Soomaaliyeed, Bulshada Caalamka, gaar ahaan wadamada daneynaya xal u hellidda xaaladdada murugada leh ee ay ku sugan yihiin ummadda Soomaaliyeed.
1- In aad isu xil saaran dib u soo celinta Nabadda, Xasilloonida iyo dib u soo nooleynta qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed; soona af jaraya dagaallada sokeeye ee dalka ku baahay, una horseedaan dhisme dowlad Soomaaliyeed oo loo wada dhan yahay.
2- In aad si wadajir ah ugu howl gashaan soo celinta sharaftii ummaddeena, kana qeyb qaadataan dib u dhiska qarankii Soomaaliyeed ee burburay.
3- In khilaaf dhexdiina ah aad ku xalisaan si nabad iyo wadahadal ku dhisan, xisaabtana ku daraya shacbiga Soomaaliyeed ee dhibaatoonaya ku dhawaad 13 sano.
1- in aad qeyb balaalaaran ka qaadataan xal u hellidda mushkiladda daba dheeraatay ee ka jirta.
2- In aad horseed u noqotaan badbaadada dadka iyo dalka
3- In aad qeyb ballaaran ka qaadataan soo celinta nabadda iyo daganaanshiyaha dhex marta beelaha Soomaaliyeed.
1- In aad meel iska dhigtaan cadaawadda gaartay qaangaarka ee aad ku kala qeybsanteen.
2- In aad ka shaqeysaan sidii dalka nabadgalyo waarta loogu soo dabaali lahaa.
3- In aad ka qeyb qaadataan dhisme nidaam suuragaliya in ay dib u soo noolaadaan adeegyadii bulshada.
Shirka Mbagathi, Kenya
Marka hore waxaan inta isu xil saartay xal u hellidda dhibaatada Soomaaliya uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo dulqaadka faraha badan ee ay u yeesheen shirka ku dhawaad halka sano ka socda dalka Kenya, una rajeyneynaa in uu noqdo kii nabadgalyo u horseeda dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Qilaafaadka madaxda Soomaaliyeed
Ma ahan markii ugu horreysay ee ay soo maraan dalalka iyo shacbiyada adduunyada kooxo iyo shaqsiyaad aan u naxariisan dadkooda.
Ma ahan wax ay ka sugayaan in xilligan oo uu socdo dib u heshiisiin qaran in weli kooxo iyo shaqsiyaad Soomaaliyeed is hortaagaan iyadoo kooxiba kooxda kale ku eedeyneyso in ay iyadu ka mas'uul tahay shirka qarka u saaran in uu burburo.
Hadalkii uu dhawaan ka jeediyay saxaafadda Col. C/laahi Yuusuf waxuu ahaa mid laga xishoodo, haddii aaney isaga laftiisa dooneyn in uu shirku noqdo mid bur-bura, sababna u noqda soo noqoshada dagaalladii sokeeye ee horseeday halaaga ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu mar kale ka codsanayaa Madaxda Soomaaliyeed ee ka qeybgalaysa shirka iyo kuwa ka maqan ama isaga baxay iyo International Community in la badbaadiyo shirka isla markaana aan la iloobin waqtigii iyo qarashkii faraha badnaa ee lagu bixiyay, haddiiba ujeedadu ay aheyd in la badbaadiyo shacbiga Soomaaliyeed.
Kulankii ay dhawaan ku yeesheen Muqdisho madax Soomaaliyeed
Kulankii ay dhawaan ku yeesheen magaalada Muqdisho C/qaasim Salaad, Muuse Suudi, Col. Hiiraale, Xaabsade iyo wakiilada SNF iyo SPM-ta Jees, haddii aaney ujeedadiisu aheyn in madaxdani ay iska kaashadaan diidmada shirka ka socda Kenya, xalna loogu helayo dhibaatada Soomaaliya, gaar ahaan goobaha ay ka taliyaan ee koofurta Soomaaliya.
Sida la og yahay kuma heshiin iska daa maslaxad Soomaaliyeed oo la helo'e dhisme nidaam suuragaliya una horseeda dadkooda goobaha ay dagan yihiin in ay ku nabad galaan.
Isbaheysigoogu waxaan u aragnaa "Cadowgeeygu cadowgiisu waa saaxiibkeey", waxaanan idiin xusuusineynaa wixii isku diiday in qaarkood is arkaan iyagoo hal magaalo wada joogo muddo ku dhaw 4 sanadood.
Waxaanan u soo jeedineynaa in wixii ay uga soo baxeen shirka aysan kaafin karin shacbiga dhibaatoonaya ee Soomaaliyeed.
Xuquuqda Aadanaha iyo Soomaaliya
Waxaa ayaandarro ah sii socoshada xadgudubyada ka dhaca guud ahaan caalamka, gaar ahaan kuwa sida naxiista daran uga socda dalka Soomaaliya.
Xadgudubyadan liddiga ku ah xuquuqda bini'aadamka ayaa si joogta ah uga dhacaayay waayihii ugu dambeeyay goobo ka mid ah magaalooyin ay ka mid tahay Muqdisho sida Dhaca, dilka, Afduubka joogtada ah ee ganacsiga isu badalay oo kooxo hubeysani ku hayaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan is difaaci karin.
Sidaas darteed wuxuu Golaha wadatashiga Soomaaliyeed la garab taagan yahay taageero "Maadi iyo Macnawi ah" kooxaha u ololeeya dhawrida xuquuqda aadanaha gaar ahaan, kuwa ka howl gala goobaha ay sida joogtada ahi uga dhacaan falal dambiyeedyan caadada noqday.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu qeyb ka noqon doonaa sidii loo suura galin lahaa isla markaana cadaaladda loo horkeeni lahaa kooxdii ay ku cadaato in ay ku gabood fashay xuquuqda aadanaha iyo tacadiyadii dhacay.
Maalinta Nabadda adduunka
21/09/2003 Maalintan oo uu adduunweynahu u aqoonsaday maalinta nabadda aduunka darteed, wuxuu Golaha wadatashiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa shacbiga Soomaaliyeed sidii ay mar kale u suurta galin lahaayeen in si nabadgalyo ah dalka loogu wada noolaan lahaa.
1- In adduunweynuhu aragti mideysan ka yeesho xal u hellidda arrimaha Soomaaliya.
2- In adduunweynuhu joojiyo taageerada hubka iyo lacagaha ay siiyaan kooxaha ka jira dalka Soomaaliya iyo madaxdooda.
3- In adduunweynuhu la soo garaan gargaarkii ay shacbiga Soomaaliyeed ka sugayeen.
Eedeymaha loo jeediyo Dowladda Ithiopia
Marka hore waxaan shacbiga iyo dowladda Ithiopia uga mahadcelineynaa soo dhaweyntii iyo martigalintii ay shacbiga Soomaaliyeed u fidiyeen qaran burburkii ka dib, marka xiga shirarkii dib u heshiisiinta ee ka dhacay dalkeeda, intaa ka dib:-
Waxaan xusuusineynaa madaxda dowladda Ithiopia anagoo qadarineyna xuduudaha dheer ee labada jamhuuriyadood ama labada dal ka dhexeysa darteed, in aaney marna suuragal noqon doonin nabadgalyo ka aslaaxda gobolka, haddii aaney madaxda Ithiopia daacad ka noqonin xal u hellidda dhibaatada Soomaaliya.
Waxaan mar kale xusuusineynaa madaxda Ithiopia abaalkii ay u madaxdii Soomaaliyeed u galeen xilligii ay la dagaalamayeen kaligii taliyihii Mingistu Heylu Mariam.
Xadgudubka cunaqabateynta Hubka
Waxaa wax laga xumaado ah faragalinta joogtada ah ee dalal ka tirsan caalamku ku hayaan arrimaha gudaha ee dalkeena Soomaaliya.
Qaran burburkii ka dib waxaa dalkeena ku soo qulqulayay hub aad iyo aad u fara badan kuwaas oo dalalka qaarkood madaxda Soomaalida u siinayeen hub iyo lacag laguu sii murjinaayo xal u hellidda mushkiladda daba dheeraatay ee Soomaaliya.
Kuma koobna sida in badan ay sheegeen madaxda Soomaalida qaarkood isla markaana eedeymo ay u jeediyeen dowladda Ithiopia uun ay in mas'uul ka tahay hubka la soo galiyo dalka Soomaaliya.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu sidoo kale eedeymo u jeedinayaa dowladaha dalalka Ereteria, Yemen, Masar, Liibiya iyo dowladda Ithiopia faragalinta joogta ah oo ay ku hayaan arrimaha Soomaaliya.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu dalalkan iyo kooxaha Soomaalida ee ay taageeraan, una adeegaan uga digayaa faragalinta qaawan ee ay ku hayaan arrimaha Soomaaliya.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay in aaney xal u aheyn dalalkan iyo shaqsiyaadka Soomaalida ah ee ka mas'uulka ah sii socoshada dhibaatada murugada leh ee heysata shacbiga Soomaaliyeed, isla markaana dacwad liddi ku ah u gudbin doono ururada caalamiga ah sida Qaramada midoobay, Midowga Yurub, Ururka Jaamacadda Carabta, ururka Islaamka, Kan Afrika iyo maxkamadda Adduunka.
Argagaxisada adduunka iyo Soomaaliya
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu mar kale si cad u cambaareynayaa howlgallada huwan magaca diineed iyo weerarada ay kooxo naxariis daran ku hayaan dadyoowga ku nool dunidan.
Waxaa aad u yaraaday dulqaadka bulshada caalamka u hayaan waxa loogu yeero argagaxisada caalamiga ka dib weerarkii kooxo naxariis-darani ku qaadeen World Trade Center sanadkii 11/09/2001, halkaas oo ay dad rayid ahi oo aan waxba galabsan ku waayeen naftoodii iyo maalkoodii.
Nasiibdarro Soomaaliya waxay ka mid noqotay dalalka lagu eedeeynayo in ay gabaad u noqotay kooxahan, nabad iyo dagaanshiyo la'aanta ka jirta Soomaaliya darteed, isla markaana madaxda Soomaalida qaarkood si ay taageero arrintan ku saabsan uga helaan sheegeen in ay Soomaaliya joogaan "Burcaddan Caalamiga ah".
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu aad uga xun yahay dhacdooyinkan foosha xun ee soo wajahay guud ahaan dadyoowga ku wada nool adduunkan dushiisa, hadaba waxaan xanuunka la wadaageynaa qoys kasta dhibaatadii ka soo gaartay mashaqadan.
Golaha wadatashiga Soomaaliyeed wuxuu mar kale International Community- ga u xaqiijinayaa in kooxahani aan marna laga soo dhaweyn doonin, una noqon doonin gabaad ay ku dhuuntaan, kana howl galaan gudaha jamhuuriyadda Soomaaliya.
Kaaliyaha Xoghayaha Arrinaha Dibedda ahna
QORAALADII HORE EE XILDHIBAAN